Iiseti zentloko AR augmented Realit isigcina Lens
Lenses Ukwaleka Boneka
lens ukulenza & Aspherical
Prism & zezindlu Mirror
Isigaba Lights Lens
izibuko Sports series
Safety isigcina Lens
Swimming izibuko lenses
Safety & Protection izibuko series
Industrial Labour Insurance lenses
Military Goggles Izibuko
Medical Eye Protection Izibuko
Laser zokhuseleko Izibuko
Lenses Vuvu Fire
Gernel Izibuko Series
Adjustable lenses Progressive ezininzi
Izibuko ngamaza lens
Graphic Izibuko lens
Products ngaphaya Series
izinto zasekhaya acrylic
izinto hotel acrylic
Acrylic ukubonisa ukuma
Mbumbulu REVO Ukwaleka
• Umngundo Design & Ukwenza
Optical Mirror wokucoca
Optical Lens zomngundo
Profiled wokucoca komhlaba
Zeziphi izinto yini?
Iimveliso zethu eziphambili optic zonke iintlobo lens ungqukuva and non ungqukuva, VR 3D lens, lens LED, iimveliso ngaphaya acrylic ( imisebenzi yobugcisa, izinto zasekhaya kunye ihotele, izinto zokubhala, amanqaku yokusetyenziswa ngemihla, njalo njalo ) , HUD kwelivi lens, isigcina ukhuseleko visors, lens kwezemidlalo (Ski Goggles lens, swimming lens, Bicycle racing lens), zelanga lens, Industrial lens yokhuselo, lenses Various umphezulu egosogoso ezizodwa ezimilise, imveliso zeplastiki, kunye • Umngundo.
Ngaba ukunika imveliso OEM?
Ewe singakwazi. Singakwazi ukwenza Ikubumbe yokuvelisa, nemveliso nokuqhutywa ngeenkonzo ezihlangeneyo ngokwe imizobo zabaxumi okanye iisampuli.
Nokuba uyakwazi kucwangciselwa kuthi?
Ngokuqinisekileyo, Ukuba banikezela izimvo zakho kunye parameters ezinxulumene, siya kwenza amalungiselelo kunye namaxwebhu epheleleyo emzonda yoyilo kwemvume yakho. Phambi kokuba ukuze ziyabhatalisa imali yoyilo, kodwa ebudeni yemveliso mass, siya kubuyela iindleko yakho zoyilo.
Yeyiphi kuvela singakwazi ukusebenzisa kwimveliso?
Yomeleza: Ukuthintela imveliso ukusuka ekuqaleni, ukuguga, kunye nefuthe anti
Bokudaya: Yongeza mbala kwi izinto ekrwada, wenze imveliso kunye imibala eyahlukileyo
Electroplating: Khupha imibala ithambeka, imibala zesilivere Amanzi, imibala emibalabala , Pattern nesingxobo, njalo-isiphumo kumphezulu ezintle.
Ngeso lenyama: Ukusebenzisa enombala obhityileyo bhanyabhanya kunye lwepolitiki ubugcisa, kumphezulu imveliso wazaleka anti umboniso UV, AR umboniso, anti zeminwe umboniso, njl
Kuthekani isigxina isampula kunye nokuhanjiswa?
intlawulo Sample ngokutsho imveliso ethile, ukuba imveliso enkulu, siya kubuyela imali uguqulelo isampuli wena iindleko kwimveliso.
Emva sample Intlawulo uguqulelo isishumi nakuLevi, umxhasi ethumela ifayile zaqinisekisa / email, ngokutsho ukuntsonkotha imveliso, Sinokuyihlola ixesha basweleka iyahlolwa kwaye zokufunda kwakhona ixesha. Isampuli yokunikezelwa inguqulo iintsuku ezi-5 ukuya kwali-10 ngokuqhelekileyo. Ukuba ufuna uluhlu isampuli ukuqinisekisa umgangatho, siya unokukunika isampula simahla, wena nje kufuneka uhlawulele neendleko zokuhamba.
Ithumela iisampulu ngu TNT , UPS , kaFedEx , DHL Express.
Ingaba unayo uyihlanganise yonke wabonisa iimveliso?
Le mifanekiso kwi website ziveliswa mveliso, kuphela wanikela njengesingqiniso, ukuba ufuna ukwazi iinkcukacha ezininzi nceda ucele umthengisi yethu.
elide kangakanani ixesha uyihlanganise imveliso?
Ngokutsho yobungakanani nokuntsonkotha imveliso ukumisela iqela elilodwa ixesha sokubumbela okuvula kunye nexesha ugqatso, ngokweemfuno ze-odolo kunye nabaxhasi lokuvavanya inombolo sokubumbela kwisisu uze ukope nenombolo umngundo. Emva kokuba izigqibo isampuli okanye umzobo, umjikelo sokubumbela lemveliso Jikelele iintsuku 20-30.
Le ubungakanani oda elinganiselwe 3K, sikwamkela izixa ezincinane imiyalelo enzima, kodwa ke ixabiso liya kuba ngaphezulu. Ukuba oda enkulu, singakwazi ukufumana amaxabiso izinto zokwenza imveliso elilungileyo nokunciphisa iindleko zolawulo, ukuze sikwazi ukunika ngexabiso elisezantsi.
ixesha lonikezelo elide kangakanani?
Ngokutsho ixesha ukungunda, Ukuze ubuninzi kunye nelungiselelo ucwangco, jikelele siya Delivery imveliso zingadlulanga iintsuku ezingama-20 emva kokwenza mold.Delivery iimveliso. irekhodi lethu engcono 50000 ngaphakathi 1usuku for VR lens
Yiyiphi indlela wophathelo?
Common EXW, FOB, CIF, njl
Yintoni izitifiketi zakho?
, Ingxelo ISO9001 SGS uvavanyo nangaphezulu, nto leyo yenza ukuba zonke iimveliso inkqubela yemveliso kakuhle.
yintoni na intlawulo?
Thina lilungu Alibaba Trade Assurance leyo inkonzo entsha ezibonelelwa Alibaba, ukulondoloza intlawulo umthengi ukuba abathengisi ukuqinisekisa abathengisi ukuzalisekisa iimbopheleleko zabo malunga nokuhanjiswa odolo kunye nomgangatho imveliso. Unako ukuhlawula nge intlawulo alibaba, okanye sebenzisa Paypal. impahla ezinkulu sakha T / T-30% idiphozithi ihlawulwe, intsalela kuhlawulwa nxamnye ikopi BL.
Malunga The Shipping Information
Ngaba sisebenzisa ummeli wethu ngenqanawe siqu?
Ewe Unga. Sasisele ibiba forwarders ezininzi. Ukuba ufuna, sinako sincome ezinye forwarders kuwe kwaye uthelekise amaxabiso kunye neenkonzo.
port kwethu ukuthunyelwa?
Ukuba ufuna ukutyelela mveliso yakho, Owona moya elikufutshane ngezizwe okanye moya basekhaya?
Shenzhen Bao'an Airport International lo moya ikufuphi, Guangzhou- Baiyun International Airport kancinci kude. Nceda usixelele phambi ngokundwendwela kwakho, siza amalungiselelo umqhubi pick up.
Malunga Procedure Order
1, locaphulo yophando-Professional
2, Qinisekisa ixabiso, ixesha phambili, umsebenzi wobugcisa, elithi intlawulo njl
3, Sales kuthumela Proforma invoyisi kunye ngetywina.
4, umthengi wenze intlawulo idiphozithi okanye isampula umrhumo ze usithumelele irisithi Bank.
5, Imveliso Initial Stage-Yazisa abaxhasi ukuba got intlawulo, Yaye uya kwenza isampuli njengoko isicelo sakho, ndinithumela iifoto okanye Iisampulu ukufumana imvume yakho. Emva kokuba imvume, siya ukwazisa ukuba siya kwenza amalungiselelo imveliso & yazise ixesha uqikelelo.
6, imveliso-thumela eliphakathi iifoto ukubonisa umgca yemveliso apho ubona imveliso yakho. Qinisekisa ixesha unikezelo kuqikelelwa kwakhona.
7, End Production-Mass iimveliso imveliso iifoto kunye neesampuli ziya kuthumela kuwe imvume, unako kwakhona amalungiselelo Ukuhlolwa iqela lesithathu.
8, Abathengi ukwenza intlawulo ukulinganisela kwaye amalungiselelo iimpahla lokuthumela.
9, Mbasa athi "ekugqibeleni" xa ufumana iimpahla wawuhluthisa nabo.
Ingxelo nathi Quality, Service, ingxelo Market & Icebiso. Kwaye singenza ngcono.
thina a ukwenziwa. Thina ulisebenzisa ngokupheleleyo kunye nezixhobo imveliso oluzenzekelayo, ithi iqinisekise ukuba bayakwazi ukwenza ucwangciso imveliso ukuze kunikezelwe ixesha.
esinako amava oneminyaka eli-10 kweli candelo. Oko kuthetha ukuba ungakwazi ukubona iingxaki-odolo kunye nemveliso. Ngoko ke, oko kuya kwenza qiniseka baphethe umngcipheko meko ezimbi ukuba zenzeke.
Khomba ukuba Khomba Service
kukho intengiso enye imele oya bakukhonze yophando kwimveliso ezithunyelwa ngaphandle. Ngexesha lenkqubo, kufuneka nje ukuxoxa naye zonke iingxaki kunye nendlela konga ixesha elininzi.
ngokuba oda ngalinye, ukuhlolwa engqongqo iza kwenziwa lisebe QC phambi ekuthuthweni. Umgangatho embi kunye meko ziya kuphetshwa ngaphakathi emnyango.
88th, indlela Xin'an, Humen idolophu, Dongguan, Guangdong, China